YEYINTNGE(CANADA): Thursday, November 11
11 Nov 2010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/11/20100အကြံပြုခြင်း
"သွေးချင်းတို့ရေ စည်းလုံးညီညွတ်ကြဖို့ အချိန်တန်ပြီ"
Thursday, November 11, 2010 at 12:35pm
အခုကျတော့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မယ်လို့ ကြုံးဝါးတဲ့သူက ကြုံးဝါး။ တချို့ကတော့ အစုိုးရကို တရားစွဲမယ်လို့ ကြုံးဝါးတဲ့သူကလည်း ကြုံးဝါး။ ထားလိုက်ပေါ့ ပြီးပါပြီး။ သူတုို့ဖာသာသူတို့ လုပ်ချင်တာ လုပ်မှာပဲလို့ ပြောတဲ့သူကလည်း ပြော။ မျိူးစုံ ဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စစ်အစုိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ အောင်မြင်မှုကြီးတခုအဖြစ် ကမ္ဘာကို ပြချင်တယ်။ သူတို့ကလည်း ကောင်းကောင်း ကျင်းပတယ်။ လူတွေကလည်း ပျော်ပျော်ကြီး ဆင်နွှဲကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘ၀သစ်အတွက် ရွေးချယ်ကြတယ်လို့ ကမ္ဘာကို ပြချင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်သွားသလဲ ဆိုတော့ သူတို့ပြစေချင်သလို မြင်စေချင်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးသူနှုန်းဟာ အလွန်နဲတယ်။ မဲပေးသူတွေက တတိုင်းပြည်လုံးမှာ ပျမ်းမျှခြင်း ၃၀ % ကနေ ၂၀ %လောက်အထိပဲ ရှိတယ်။ လူတွေက မဲတွေ မပေးကြဘူး။ လူတွေက စစ်အစုိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀ိုင်းပြီး ထောက်ခံပြီး ဆင်နွှဲခြင်း မရှိဘူး။ ဒါကို စစ်အစုိုးရက မပြနိုင်တော့ဘူး။ မအောင်မြင်ဘူး။ ရှုံးသွားတယ်။ အဓိကရှုံးတဲ့သူဟာ စစ်အစုိုးရပဲ...
(ကောက်နုတ်ချက် from ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ
No vote ပဲဖြစ်ဖြစ် I vote ပဲဖြစ်ဖြစ် သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။
ရွှေးကောက်ပွဲကို နအဖက ဘာလို့လုပ်တာလည်း?
ရွှေးကောက်ပွဲမလုပ်ပဲ ဒီအတိုင်းဆက်နေသွားရင်ရော မဖြစ်ဘူးလား?
တိုင်းပြည်ဟာ ဆင်းရဲတွင်းထဲ နက်သထက်ပိုနက်လာမယ်ဆိုတာကို သိတယ်၊ သိကိုသိတယ်။
အဲသလို ဆင်းရဲတွင်းနက်လာလို့ တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ လူထုက အုံကြွပြီဆို သူတို့ရဲ့နိဂုံးကိုလည်း သဘောပေါက်တယ်။
ဒီနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်နိုင်ငံမှ အထီးကျန်နေလို့မရတော့ဘူး၊ နေချင်သပဆိုနေကြည့်လေ--
အထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ ကျူးဘားလို့ နိုင်ငံပဲကြည့်လိုက်ပါ..
နောက်ဆုံးမခံနိုင်လို့ ပြုပြင်ပြောင်းလည်းရေးတွေလုပ်လာရပြီ၊ ဘယ်ပြည်သူက ကြာရှည်အငတ်ခံနိုင်မှာလည်း၊ ဒုက္ခခံနိုင်မလည်း ပေါက်ကွဲထွက်လာမှာပဲ အဲဒီလို ပေါက်ကွဲမှု့ တွေကြောင့် ဇာတ်သိမ်းမလှတဲ့ အာဏာရှင် သမိုင်းကြောင်းတွေကိုလည်း နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်များမသိဘူးမထင်ပါနဲ့ သိပါတယ်။
အဲဒါကို ကုစားဘို့ နအဖဟာ မှန်မှန်ကန်ကန်မစဉ်းစားပဲ ဆေးမြီးတို နဲ့ကုဘို့ မမှန်ကန်တဲ့ အခြေခံဥပဒေကို မရိုးမသားပြဌာန်းတယ် ၊ ရွှေးကောက်ပွဲလမ်းကိုရွှေးချယ်တယ်။
အဲဒီရွှေးကောက်ပွဲကိုရော မှန်မှန်ကန်ကန်အကောင်ထည်ဖော်ရဲ့လား ၊ မဖော်တာအားလုံးသိနေပါပြီ။
တကယ်တော့ ဒါဟာ ရွှေးကောက်ပွဲ ( Election ) မှမဟုတ်တာ ( Selection ) ရွှေးထုတ်ပွဲပဲ၊ ဒါကိုရွှေးကောက်ပွဲထင်ပြီး လျှောက်မိကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအပြစ်မဆိုသာပါဘူး၊
တကယ်တော့ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ဘယ်အာဏာရှင်မှ ရက်စက်ဘို့ဝန်မလေးတတ်ဘူးဆိုတာ အစဉ်လာပါ၊ အဲဒီတော့ လက်ရှိ နအဖ ဟာရွှေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရခြင်းဟာလည်း.. နိုင်ငံတကာကိုဝင်ဆန့်ဘို့ကြိုးစားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမှတိုင်းပြည် ကျဆင်းနေတဲ့ စီးပွားရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့လွယ်လွယ်တွေးခဲ့တာကိုး၊ တနည်းအားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို အချဉ်လို့ထင်မိတာကို၊ သူတို့ ထင်သလို ကမ္ဘာကြီးကရောချဉ်ပါသလား၊ အခုရွှေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို ထောက်ခံလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါသလား၊ တကယ်တော့ နအဖ အကြံက နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးတွေမြန်မာမှာဝင်ရောက်လာဘို့ ၊ အဲဒါမှတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတိုးတက်မယ်၊ အဲဒါမှ လူထုအုံကြွမှု့မဖြစ်မယ်။
သူတို့အေးအေးလူလူတသက်စာအုပ်ချုပ်သွားနိုင်မယ် ဒီလိုတွေးတာကိုး၊ သူတို့တွေးသလို ထင်သလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ပါသလား၊ အခုရွှေးကောက်ပွဲမှာ ကြံ့ဖွတ် ၈၀%မကလို့ ၁၀၀%အပြည့်နဲ့ပဲနိုင်နိုင် သိပ်ပူစရာမရှိပါဘူး၊ ဒီရွှေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အဓိက စီးပွားမြှုတ်နှံနိုင်တဲ့ ဘယ်နိုင်ငံကမှထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြည့်ပါ၊
မထောက်ခံတော့ရော ဂရုစိုက်စရာလားလို့မေးခဲ့ရင် ကျနော်ကလည်းပြန်မေးမယ် ဒါလိုခြင်လို့ ဒါလုပ်တာ ဒါမရတော့ ခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဟာဘာဖြစ်သွားသလည်း အလကားပဲပေါ့ဆိုရင် ဘာပြောမလည်း၊
အဲဒီတော့ အချင်းချင် အထင်တွေမမှားကြပါနဲ့နော်၊ တကယ်တော့ နအဖ လုပ်သင့်တာက ရွှေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး ( ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေရယ်၊ နအဖရယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေရယ် ) အဲဒီကနေ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အဲဒါတွေပြီးမှ၊ အခြေခံဥပဒေပြဌာန်း၊ပြီးမှရွှေးကောက်ပွဲလုပ်၊ အဲသလိုမလုပ်သမျှ နောက်ထပ် ရွှေးကောက်ပွဲ အကြိမ် ၁၀၀ လုပ် တိုင်းပြည်ဘယ်တော့မှတိုးတက်လာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာယုံပါ၊
ဘယ်နိင်ငံတကာကမှလည်း စီးပွားလာမမြှုတ်နှံဘူး၊ မွဲပြီးရင်းမွဲဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ အချုပ်ပြောရရင် အဲဒီလမ်းရောက်ဘို့ ဘက်ပေါင်းစုံကကြိုးစားကြပါ၊ တရုတ်လို အာဆီယံလို စီးပွားလာမြှုတ်နှံတာလောက်လေးနဲ့ လူလုံးမလှဘူးဆိုတာကိုလည်းမမေ့ကြပါနဲ့၊
၈၀% နိုင်တာနည်းပါသေးတယ်၊ ၁၀၀ % နိုင်လည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ နအဖ ထင်သလိုဖြစ်မလာပါဘူး၊
(ကောက်နုတ်ချက် from နအဖ ထင်သလို မချဉ်တဲ့ ကမ္ဘာ ( ရေးသားသူ- စစ်မုန်းသူ )
ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် ကျနော်တို့တွေ အမြတ်များစွာ ရလိုက်ပါတယ်...
နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ကိုယ်ရော စိတ်ပါပေးပြီး လုပ်နေကြတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက သွေးချင်းတွေ စုစည်းမိသွားတယ်...
စစ်အာဏာရှင်တွေကို မလိုလားတဲ့ မြန်မာပြည်ကောင်းစားရေးကို လိုလားကြတဲ့သူတွေ အဆက်အသွယ်တွေ ပိုရှိလာကြတယ်...
အမြင်မတူကြတာတွေရှိနေကြပေမယ့်လို့ စေတနာတော့ တူညီကြတာ တွေ့ရတယ်...
အချက်အလက်တွေနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမှန်တရားကို ပိုပြီး သိသာထင်ရှားစေကြမယ်...
ဒါကြောင့် အခုလို ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ ရလိုက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေက အဲဒါတွေပဲ။ဒါတွေကို ကျနော်တို့ အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်ကြဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်...
ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို လေးနက်စေချင်တာကြောင့် သိပ်အစွန်းရောက်တဲ့ စကားတွေကိုတော့ ချင့်ချိန်ပြီးမှ ပြောကြစေချင်တယ်...မပြောခင် မှားယွင်းနေနိုင်မယ်ထင်ရင် သေချာပြန်စဉ်းစားပြီးမှ ပြောဆိုစေချင်တယ်...
ကိုယ့်စကားတစ်ခွန်းကြောင့် မသိနားမလည်တဲ့သူတွေ အမှတ်မမှားကြစေဖို့ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်...
အတ္တတွေကို တတ်နိုင်သလောက် လျော့ချပြီး ရိုးသားကြဖို့ လိုပါတယ်...
အကြိမ်ကြိမ် ပြောဖြစ်နေတဲ့ စကား၁ခုကို အလေးအနက်ထားပြီး ထပ်ခါပြောပါမယ်...
အခု ကျနော်တို့အားလုံး စစ်အာဏာရှင်စနစ် ပြုတ်ကျရေး ကြိုးပမ်းနေကြရာမှာ အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး လိုအပ်နေတာ အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါ...
ဒါကို လုပ်ဆောင်ကြတဲ့ အခါမှာလည်း မသိပဲ ယောင်ဝါးဝါးလုပ်ကြမှာထက် သေချာရှင်းလင်းတိကျစွာသိပြီး လုပ်မှ ပိုကောင်းမှာ ဖြစ်သလို၊ ပိုပြီးလည်း အကျိုးကျေးဇူးများနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်...
ဦးတည်ချက်တွေ ပြတ်သားလာမယ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှန်ကန်လာမယ်...
ဒါဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်...
ဒါကြောင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်းက သွေးချင်းတွေကို နိုင်ငံရေး အသိအမြင်တွေ ကြွယ်ဝအောင် လုပ်ပေးကြပါ...တစ်ဦးတစ်ယောက်စီက ကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရာတွေကို တာဝန်ယူပြီး လုပ်ပေးကြပါ...
သတင်းအချက်အလက်တွေ ဖြန့်ဝေပေးရင်း နိုင်ငံရေးကို မျက်ခြေမပြတ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ...
တရားဥပဒေစိုးမိုးပြီး အေးချမ်းသာယာသော ခေတ်မီတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင် ကျနော်တို့ သွေးချင်းညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ကြိုးစားကြရအောင်လား...
ကြည့်ကြစမ်းပါအုံး သွေးချင်တို့ရေ... ဘယ်လောက်လှပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နိုင်ငံကြီးလည်း ဆိုတာ...
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြုတ်ချပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ကြရအောင် စည်းလုံးညီညွတ်ကြမယ်လေ...
ဦးကျော်ဇံသာ ဗုဒ္ဓဟူး, 10 နိုဝင်ဘာ 2010
နှစ်ပေါင်း (၂၀) အတွင်း မြန်မာစစ်အစိုးရ ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်က လူတချို့  မျှော်မှန်းခဲ့သလို ရွေးကောက်ပွဲကနေ ဒီမိုကရေစီအတွက် နေရာလေးတကွက် ရလာပြီး အဲဒီကမှတဆင့် တိုးချဲ့  သွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေ ဘယ်လောက်တွေ့ရပါပြီလဲ။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲကို မပြစ်ပယ်သင့်ဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့သူ ဥရောပ-မြန်မာရုံး ညွှန်းကြားရေးမှုး ဦးဟန်ယောင်ဝေ ကို ဦးကျော်ဇံသာ (ဗွီအိုအေ) က ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်က ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အမြင် (၂) မျိုး ရှိမယ်ဆိုရင် မှားမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့ ကတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲက ဖြတ်သန်းရမှာပဲ။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတဲ့အခါမှာ လုံးဝ မဟုတ်တောင်မှ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစလေး ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် နေရာတနေရာလေးရမယ်။ တဖြည်းဖြည်း ချဲ့ ထွင်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ အကောင်းမြင်ချင်တဲ့ လူတချို့  ရှိခဲ့သလို။ တချို့ ကလည်း ဒီ ရွေးကောက်ပွဲက လုံးဝသုံးလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ စစ်တပ်ကသာ ဆက်လက်ကြီးစိုးနေမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးတဲ့အခါမှာ ဒုက္ခသည်ပြဿနာတွေ၊ နိုင်ငံခြားကို ထွက်ပြေးလာမယ့် ပြဿနာတွေ ပိုများလာမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ပိုပြီး ပဋိပက္ခတွေ ရှိလာမယ်ဆိုတာတွေလည်း သုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ အခု ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ မကြာခင်မှာပဲ အဆိုးမြင်မယ့် လူတွေရဲ့  အမြင်က ပိုမှန်မယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဦးဟန်အနေနဲ့ အကောင်းမြင်ဘက်က ပါခဲ့တဲ့လူ။ ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ကောင်းတဲ့အလားအလာ ရှိကောင်းရှိမယ်လို့ မြင်တဲ့လူပါ။ အခုအခါမှာ အဲဒီလို အကောင်းမြင်တဲ့ ဆက်လက်ပြီး ရှိနေပါသေးရဲ့  လား။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အခုဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စက ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို အကုန်သိပါတယ်။ နအဖ အနေနဲ့လည်း လိမ်ညာမယ်၊ နိုင်အောင် အရယူမယ်ဆိုတာလည်း သိကြတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်း တိုက်မယ်ဆိုတာလည်း သိတယ်။ ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးကတော့ ဒီအချိန်မှာ လူတိုင်းက နအဖ ကို မထောက်ခံဘူးဆိုတာကို ကမ္ဘာကသိပြီ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် နအဖ ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ပါတီတွေ ပေါ်လာတယ်။ လူထုကလည်း တခြားပါတီတွေကို အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း နအဖ က ကြိုတင်မဲကို သုံးပြီး သူတို့ နိုင်တယ်ဆိုတာကို လုပ်နေတာ၊ သူတို့ လိမ်တယ်ဆိုတာကို အထင်အရှား မြင်ရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ ဒီလောက် လိမ်နေတာ၊ မဟုတ်တာတွေလုပ်နေတာ ပေါ်လွှင်နေရဲ့ နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီကနေ ဒီမိုကရေစီအတွက် အလားအလာကောင်းတွေ ပေါ်နိုင်မယ်လို့ ထင်နေရတာလဲ။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ အနည်းဆုံးကတော့ လူထုရဲ့  ဆန္ဒကို သူတို့က ဟန်ဆောင်ပြီး နားထောင်တဲ့ အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်။ ကျနော်တို့ လုပ်ချင်တာက တကယ်ပဲ လူထုရဲ့ ဆန္ဒကို လိုက်နာနိုင်အောင် လုပ်ချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ သူ ဟန်ဆောင်ပေမယ့် ကျနော်တို့အတွက် အ နိုင်အကွက်တကွက်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အကောင်းမြင်လွန်ရာ မကျပေဘူးလား။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ ကျနော်တို့ အကောင်းမြင်လွန်တယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ဒီမိုကရေစီ လိုလားရင် ကျနော်တို့က လူထုပါဝင်မှုရှိမှ ရပါမယ်။ လူထုလက်ခံမှုရှိမှ ရမယ်။ နအဖကလည်း သူတို့ လိမ်ညာပေမယ့် အရင်ကဆိုရင် မဲလိုက်ဆွယ်တယ်။ လူထုတွေကို အကောင်းလုပ်ပြတယ်။ ဒီဟာကလည်း သူတို့အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီသဘော နည်းနည်းပေါက်လာပြီလို့ မြင်ရပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခု မကြာခင် အစိုးရသစ်ဖွဲ့လာမယ်။ လွှတ်တော်ကိုလည်း သူတို့ ကြီးစိုးမယ်။ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း အနည်းဆုံး နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း စစ်တပ်က ပါအုန်းမယ်။ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ယူထားတယ်ဆိုတော့။ ဒီအထဲမှာ လူထု သဘောဆန္ဒကို ကိုယ်စားပြုပြီး လွှတ်တော်မှာ ပြောနိုင်မယ့်လူ ဘယ်သူတွေများ ရှိလို့လဲ။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ နည်းပေမယ့် ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ အခုနပြောသလို ဒီဟာက လမ်းစဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ကျနော်တို့က နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်တုန်းကဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီက ၁၉၉၀ မှာ နိုင်ခဲ့လို့ သူတို့က လူထုဘက်က အော်ပေးလို့ ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပါလီမန်ထဲမှာ မဟုတ်ဘူး။ တရားဝင် မဟုတ်ဘူး။ အပြင်ကနေ အော်နေရတယ်။ အခုကတော့ ပါလီမန်ထဲမှာ လူထုဘက်နေနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရောက်လာပြီဆိုတာ တိုးတက်လာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာကို ကြည့်ရအောင်ပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေဆိုရင် တော်တော်များများ ဘယ်သူကမှ လက်မခံကြဘူး။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို သူတို့လက်အောက် အတင်းအဓမ္မ သွတ်သွင်းတာ။ နိုင်ငံရေးပြဿနာ မဖြေရှင်း မပြေလည်ဘဲနဲ့။ ဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ ဦးဟန်ယောင်ဝေ မြင်သလိုပဲ အခု လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းဖြစ်မယ့် ကိစ္စကလေးကိုပဲ အကောင်းမြင်ပြီးတော့ လက်နက်စွန့်ပြီးတော့ စစ်အစိုးရလက်အောက်ကို ထိုးအပ်သင့်ပါသလား။ ဒါမှ တိုင်းရင်းသားပြဿနာ သူတို့သဘောအရ ပြေလည်တော့မှပေါ့။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာက နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ တဖက်က လက်နက်ကိုင်တဲ့ဖက်နဲ့ တဖက်ကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီကနေ ဝင်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဖက်။ နှစ်ဖက်စလုံး တိုက်ပွဲဝင်ရပါမယ်။ လက်နက်စွန့်သွားမယ်ဆိုရင် လူထုကို ကာကွယ်မယ့်လူ မရှိတော့ပါဘူး။ ဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့ကတော့ ဘယ်လို့နဲ့မှ နိုင်ငံရေးအဖြေ မရမချင်းကတော့ ဘယ်လိုမှ လက်နက်စွန့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ divided ဖြစ်နေမှာပေါ့။ ကချင် ဆိုကြပါစို့။ ကေအိုင်အို က ကချင်လူမျိုး အများစုကို ကိုယ်စားပြုမှု ရယူထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်။ ငါတို့ဟာ ဒီလက်နက်စွန့်ရေးကို လက်မခံဘူးဆိုပြီး အကုန်လုံး တသွေးတသံ သူတို့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း မလိုက်နာဘဲနဲ့ - တချို့ ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့်ကိစ္စကို ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ သူတို့အထဲမှာ နှစ်ခြမ်း မကွဲကုန်ဘူးလား။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ မကွဲပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ နှစ်ဖွဲ့စလုံးက သူတို့ လူမျိုးအတွက် လုပ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ တဖက်နဲ့ တဖက် အကန့်အသတ် မလုပ်ဘဲနဲ့ ရှေ့ တိုးနိုင်တဲ့လူ တိုးသွားဖို့လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကချင်ကိုပဲ နမူနာကြည့်မယ်ဆိုရင် ကချင်ဘက်ကလူတွေ ပြောတယ်။ သူတို့ ကေအိုင်အို နဲ့ affiliation ရှိခဲ့တယ်။ အဆက်အသွယ် ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကို ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့် မပေးခဲ့ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲလည်း မဝင်ရဘူး။ ဝင်သွားတဲ့ ပါတီတွေက ကြံ့ဖွံ့ပါတီ နဲ့ ကြံ့ဖွံ့လိုပဲ အလားတူ စစ်အစိုးရ proxy ခပ်ဆန်ဆန် ပါတီပဲ သူတို့ဆီမှာ ပြိုင်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက စစ်အစိုးရ လိုလားတဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်မနေဘူးလား။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာက မတူတာ ဘာလဲဆိုရင် ကြံ့ဖွံ့ဘက် ပါသွားတဲ့ သူကလည်း ကချင် ပါပဲ။ သူက သူ့လူမျိုးအတွက် ပြန်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် သူ့က နအဖပါတီထဲမှာ ပါသွားပေမယ့် ကချင်လူမျိုးရဲ့  ရန်သူမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့ တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့က ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူ့လူမျိုးအတွက် ကြိုးစားနိုင်ရင် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ တိုင်းရင်းသားတွေက လက်နက်ကိုင်တဲ့လူက ကိုင်နေအုန်းမယ်ဆိုတော့ အခု စစ်အစိုးရ တဖက်သတ် လုပ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲက ပေါ်ထွက်လာမယ့် လွှတ်တော် အစိုးရကရော ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အတိုင်း လုပ်နိုင်ပါမလား။ သို့တည်းမဟုတ် စစ်တပ်က နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ ပြည်တွင်း ဆူပူသောင်းကျန်းမှုကို အကြောင်းပြပြီး တချိန်လုံး ဖိဖိစီးစီး လုပ်ထားမယ့်သဘော ဖြစ်မနေဘူးလား။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ အဲဒါတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် အခု ဖြစ်လာမယ့် အစိုးရက စစ်ဘက်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ သူက တိုင်းရင်းသား ပြဿနာကို ဖြေရှင်းလို့ မရဘူးဖြစ်မယ်။ တပ်မတော်ကပဲ ဖြေရှင်းမယ့် အလားအလာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်က အရင်ကလိုပဲ စစ်အင်အားနဲ့ တိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှ အဖြေရှာနိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရက တပ်မတော်က တိုင်းရင်းသားပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းချင်တယ်။ တက်လာတဲ့ အစိုးရကို အသုံးပြုပြီးတော့ လူထုရွေးလာတဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဖြေထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နောက်တခုက ဒီ ရွေးကောက်ပွဲကို အပြတ် သပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့ CRPP (Committee Representing the People's Parliament) အဖွဲ့နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်တို့လို ပြည်သူလူထု ထောက်ခံမှု၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ထောက်ခံမှု အများစုကို ရတဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့  အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လိုနေမလဲ။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ တရားဝင် ဆက်ပြီးတော့ သွားလို့မရတော့ဘူး။ ဒါက နအဖ ဥပဒေ အရဆိုရင်။ ဒါပေမဲ့ ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ အဲဒီ ခေါင်းဆောင်တွေကပဲ သူတို့က လူထုအတွက် လုပ်လာတော့ သူတို့ ပါတီ ရှိသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ သူတို့ကတော့ လူထုအတွက် ဆက်ပြီးလုပ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ လုပ်မလဲ။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လုပ်မလဲဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နောက်ဆုံး မေးချင်တာကတော့ ပြည်ပအခြေစိုက်ပြီး လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စ၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ထက်စီးနှင်း လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုလူတွေ ကြားနေရတဲ့အချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီအရေး အခြေပြ အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ယှဉ်ပြိုင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ခေါ်တာတို့ တချို့ က လက်မခံတာတို့ အဲဒါတွေ ကြားရပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့တွေရဲ့  အနာဂတ် ဘယ်လို သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ နအဖ လုပ်တဲ့ဟာကို လက်မခံချင်တာကတော့ ဘယ်သူမှ လက်မခံချင်ပါဘူး။ အပြင်က အဖွဲ့ရော အတွင်းက အဖွဲ့ရော။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တွင်းက အဖွဲ့တွေကတော့ လက်မခံလို့ မရဘူး။ သူတို့ကတော့ နအဖ ဘောင်ထဲကနေ ဆက်ပြီးလုပ်သွားရမယ့် အနေအထား ရှိပါတယ်။ အပြင်မှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ ကျနော် နားလည်းသလောက်ကတော့ ဒီ တရားမျှတခြင်း မရှိသေးတဲ့ ကာလလုံး၊ ဒီမိုကရေစီ မရသေးတဲ့ကာလလုံး ဆက်ပြီးတော့ အပြင်ကနေ နိုင်ငံတကာကို စည်းရုံးပြီးတော့ နအဖ မကောင်းကြောင်း။ တက်လာတဲ့ အစိုးရက သူတို့လုပ်တဲ့ အလုပ် မှန်သလား၊ မမှန်ဘူးလားဆိုတာကို လိုက်စောင့်ကြည့်မယ်လို့ ကျနော်ယုံပါတယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ သူတို့က နအဖ မကောင်းကြောင်းဆိုတော့ သူတို့က ဦးဟန် မြင်တဲ့အမြင်မျိုး။ ဒီဟာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီအတွက် ကောင်းတဲ့ အလားအလာဆိုတဲ့ သဘောထားမျိုး သူတို့မှာ မရှိဘူး။
ဦးဟန်ယောင်ဝေ ။ ။ သူတို့က အဲဒီလိုမျိုး မြင်ပေမယ့် သူတို့လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းက ကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ နအဖ မဟုတ်ပေမယ့် တက်လာတဲ့ အစိုးရက ဘယ်လိုအပြစ်ရှိတယ်။ ဘယ်လို လုပ်နေတာ မှားတယ်၊ မှန်တယ် စောင့်ကြည့်ပြီး ထောက်ပြနေမယ်ဆိုရင် အကျိုးဖြစ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် ဘယ်သူမှ စောင့်မကြည့်ဘူးဆိုရင် သူတို့က ကြိုက်သလို နအဖ၊ တပ်မတော် က ကြိုက်သလို လုပ်သွားရင် ကျနော် ဒီမိုကရေစီ ရလာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အပြင်ကနေ စောင့်ကြည့်ပြီး ထောက်ပြနေမယ်ဆိုရင် သူတို့ကလည်း နိုင်ငံတကာ လက်ခံလာအောင် ကြိုးစားကြမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း | ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၃၅ မိနစ်
ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးတော့ ပြီးသွားပါပြီ။ ကြက်ဥအရောင် တိမ်တောင်သဖွယ်ထင်ယောင်မှားတွေ၊ စိတ်ကူးယဉ် မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ အကောင်းမြင်စိတ်လေးတွေ- သွားပြီ၊ ဆောင်းလေနဲ့အတူလွင့်ပြယ်သွားပါပြီ။ မြန်မာ့ခေတ်သစ်သမိုင်း မှာ အရုပ်ဆိုးဆုံး၊ အညစ်ပတ်ဆုံး၊ အကျင့်သိက္ခာအမဲ့ဆုံး၊ အရှက်အမဲ့ဆုံးရွေးကောက်ပွဲကြီးပြီးသွားပါပြီ။
နအဖစစ်အုပ်စုဟာ ဒါလောက်ကြီးတော့ ပြောင်မညစ်လောက်ပါဘူးလို့ တွက်ခဲ့တဲ့လူတွေအဖို့ ဘာပြောရမှန်းမသိ အောင်ဖြစ်သွားပြီ။ နအဖနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက် တာဝန်သိသိရှေ့နေလိုက်နေသူများလဲ ပါးစပ်ပိတ်ကုန်ကြပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ လှုပ်သာရှားသာမယ့် စပေ့စ်လေးတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတာ လက်စသတ်တော့ “ကြိုတင်မဲ”တွေ ဆာလာအိတ်တွေနဲ့သယ်လာနိုင်တဲ့စပေ့စ်ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ အမတ်လောင်းကိုယ်တိုင်က မဲပေးခွင့်မရတဲ့စပေ့စ်၊ ၀င်အရွေးခံသူတွေတောင်မှ မဲရေတွက်တဲ့နေရာကို ၀င်ကြည့်ခွင့်မရတဲ့စပေ့စ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ တွေ့ခဲ့ရပါပြီ။ အဲဒီ စပေ့စ်ဟာ မဲရုံဂိတ်ဝလောက်အထိသာကျယ်ဝန်းပြီး လွှတ်တော်ထဲအထိမရောက်တာလဲ ရှင်းသွားပါပြီ။ နအဖ စစ်အုပ်စုဟာ မုန့်သာဆိုရင် တဖဲ့စီဝေစားမယ်၊ အာဏာကိုတော့ ဝေမစားဘူးဆိုတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ အဆင့်မှာတင် ဒါလောက်ညစ်နေရင် လွှတ်တော်ထဲရောက်မှ စစ်အုပ်စုရဲ့လက်ခုပ်ထဲကနေ ဒီမိုကရေစီကို တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပိုထင်ရှား သွားတယ်လို့လဲ အတိအကျ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဝန်ကြီးဟောင်း၊ ၀န်ကြီးလောင်းမှမရှုံးစေရလို့ အာမခံထားတဲ့အလား ရှုံးရာကနိုင်၊ နိုင်ပြီးမှရှုံး၊ သမိုင်းဝင် မျက်လှည့်ပွဲကြီးပြီးသွားတော့ တရားသံဝေဂသံတွေ၊ မချိတင်ကဲသံတွေ၊ ဒေါသသံတွေ အသံမျိုးစုံကြားရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တုန်းက ဒီချုပ်ကိုလက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြီး ပုတ်ခတ်အပြစ်တင်ခဲ့တဲ့ ၀င်အရွေးခံခဲ့သူတဦးကတော့ “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောတာမှန်ပါတယ်၊ သူတို့ဒီလောက် ဆိုးမယ်မှန်း မသိလို့ ၀င်ပြိုင်မိတာပါ”လို့ ရေဒီယိုအင်တာဗျူးမှာ ပြောသွားတာဟာ မှတ်သားစရာကောင်းလှပါတယ်။
ဒိထက်ပိုပြီးထူးထူးခြားခြား မှတ်သားသင့်တာကတော့ နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့အထက်မျိုးဆက် တစညပါတီအပေါ်ကိုလဲ အပြတ်အသတ်ညစ်ပြလိုက်တာပါပဲ။ ဒါဟာ စစ်အုပ်စုတွေမှာ မျိုးဆက်တခုနဲ့တခုလက်မတွဲ နိုင်ကြောင်း၊ အကျိုးစီးပွားတွေ မတူညီကြောင်း၊ ချက်ကြိုးပြတ်ကြောင်း ကမ္ဘာသိ ကြေညာလိုက်သလိုရှိပါတယ်။ ကြံ့ဖွတ်ကလွဲရင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရေအများဆုံး ၀င်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ တစညပါတီဟာ ကိုယ်စားလှယ်စာရင်းတင်ခချည်း သက်သက်က သိန်း၅,၀၀၀၊ တခြားကုန်ကျစရိတ်တွေပါ ပေါင်းထည့်လိုက်ရင် သိန်းသောင်းနဲ့ချီ ဆုံးရှုံးသွားမဲ့သဘော ရှိပါတယ်။ ဓားမပါ ဆုံးတာပါပဲ။
တကယ်ကျတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ နအဖစစ်အစိုးရအနေနဲ့သူတို့နိုင်စေချင်သူကို အနိုင်ပေး၊ ရှုံးစေချင်သူကို ရှုံးအောင်လုပ်လို့ရတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေထဲမှာကိုပဲ နအဖဟာ သူတို့သဘောကျတဲ့၊ သူတို့ ကြိုးဆွဲတိုင်းကမယ့် တိုင်းရင်းသားတချို့ကိုတော့ အလွယ်တကူဝင်အရွေးခံခွင့်ပေးတဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့ကြံ့ဖွံ့ကိုတောင်မှ အဲဒီတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံတာမလုပ်စေခဲ့ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားပါတီတိုင်း နအဖလက်ကိုင်ဒုတ်လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေတို့ဟာ သူတို့စစ်အုပ်စုအနေနဲ့ အခုအခါမှာ မဟာမိတ်မလိုကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် တချိန်က အတိုက်အခံလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကို ဘယ်လိုမှလက်တွဲမခေါ်နိုင်ကြောင်း ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးတခုကိုပြောပါဆိုရင် အားလုံးကို နအဖအပေါ်စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေ စွန့်လွှတ်အောင် မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့အချက်ပါပဲ။ ဒါကနေတဆက်ထဲ ရွေးကောက်ပွဲလွန်ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ အင်အားစုစည်းမှုအပြောင်းအလဲတွေ ထပ်တွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။
နအဖအဖို့တော့ ပြည်ပမှာပိုအရှက်ကွဲရုံမက နဂိုက ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် ဘာကြီးဖြစ်နေနေ စစ်အစိုးရနဲ့ဝင်ပူးလိုက်ဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့ နိုင်ငံတွေတောင်မှ လက်တွန့်သွားတာနဲ့ကြုံရပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ကြံ့ဖွတ်အဖို့ ဒီရွေး ကောက်ပွဲမှာ မဟာမိတ်မရလိုက်ပဲ သူတို့ကိုမုန်းတီးသူတွေသာရလိုက်ပါတယ်၊ နဂိုက နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်နဲ့ ကင်းကွာ နေရာကနေ ဒီရွေးကောက်ပွဲကျမှ နိုင်ငံရေးထဲဝင်ပါလာကြသူတွေဟာ ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးမျိုးကိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားရပါတော့မယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲအဖြေထွက်တော့မှ တောင်ပို့မှန်းသိလာတဲ့ တခြားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေလဲ ပိုမိုလက်တွေ့ကျတဲ့ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပေါ် တက်လာကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ နအဖရဲ့ “စည်းကမ်းရှိပြီး စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီ”ဟာ မဲခိုး၊ မဲပိုး(တင်ကြိုမဲ၊ ပြည်ပရောက်မဲဆိုတာတွေနဲ့ ထပ်ပိုးတာ)၊ ထင်တိုင်း လုပ်နိုင်ခွင့်ရပြီး ပြည်သူတွေကျတော့ သူတို့လုပ်သမျှ လက်ပိုက်ကြည့်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေစေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေတာတွေကို တရုတ်ရှေးဟောင်းစကားပုံတခုနဲ့ပဲ ခိုင်းနှိုင်းလိုက်ချင်ပါတယ်။ အဲဒါက “ရွာသူကြီးကျတော့ ရွာကိုမီးတိုက်ခွင့်ရှိပြီး ရွာသားတွေကျတော့ မီးခွက်လေးတောင် ထွန်းခွင့်မရှိဘူး” ဆိုတာပါပဲ။
အဖေလုပ်သူဗိုလ်ချုပ်ကလည်းသမီးဘာလုပ်လုပ်အမှန်သာဖြစ်ပြီးသူသမီးနင့်ပြသနာဖြစ်တဲ့သူအား အခွင့်အာဏာသုံးပြီးသူ့ သမီနှင့်၇န်ဖြစ်သူကိုအချုပ်ထဲထည်ပါသည်။ကောင်မလေးအပြင်သွားတာကအစလုံခြုံေ၇းအတွက်ဆိုပြီးပွိုင့်ကား၁စီး။အ၇ာ၇ှိ၁ယောက်လိုက်၇
Read more: http://www.cbc.ca/canada/north/story/2010/11/10/edmonton-kenn-borek-export-charges.html#ixzz151IYj7mM
ကျွန်ူပ်တို့ နိူင်ငံ၏ ယနေ့ နိူင်ငံရေး ချိန်ခါသည် ခေါင်းဆောင်ကောင်း လိုအပ်နေသလို နောက်လိုက် ကောင်းများလည်း လိုအပ်နေသည် မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည် ။ ခေါင်းဆောင်မည့်သူများကား အထင်အရှားရှိနေပါသည် ။ ကျွန်တော်တို့ နောက်လိုက်ကောင်း ဖြစ်နိူင်ဖို့သာ အရေးကြီးသည် ။ ခေါင်းဆောင်ဆိုသည် မှာ တိုးတက်သော ညဏ်အမြော်အမြင် ရှိရမည့် အပြင် ပြည်သူလူထု အား ကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ်ထား နိူင်ရမည့် အပြင် ကိုယ်ကျိုးအတ္တထက် အများကောင်းစားရေးကို ဦးစားပေးရမည့် လူမျိုးဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိူင်ငံရေး အခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်မှု တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှ ရမည် ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် နိူင်ငံကို ခေါင်းဆောင်မည့်သူသည် နိူင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း အလယ်တွင် ၀င်ဆန့်နိူင်ဖို့ သူတို့လေးစားလောက်သည့် အရည်အချင်းရှိရမည် ဖြစ်သလို ပြည်သူလူထု၏ လေးစားချစ်ခင် ယုံကြည်အားထားသည့် လူမျိုးဖြစ်သင့်သည် ။ ယနေ့ စစ်အာဏာရှင်များ၏ ယုတ်မာကောက်ကျစ်သော လုပ်ရပ်များကြောင့် ကျွန်ူပ်တို့ တိုင်းပြည်မှ ဂုတ်သွေးစုပ်မည့် နိူင်ငံများမှ အပ အခြားသော နိူင်ငံတော်တော်များများသည် စစ်အာဏာရှင်များ နှင့် မဆက်ဆံလိုကြ ။ မလွဲသာ မရှောင်သာ ဆက်ဆံနေကြရသည့် နိူင်ငံများမှာလည်း သိပ်မကြည်ဖြူချင်ကြ ။ ထို့အကျိုးဆက်ကား
မြန်မာနိူင်ငံ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေမှာ တဖြည်းဖြည်းလုံးပါး ပါးလျှက် ရှိနေပြီ ။
သူတို့ တွင်တွင်သုံးကြသည် ။ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ယုံကြည်ကာ စစ်အာဏာရှင်တို့ သတ်ကွင်းကို
ရင်ကော့ပြီး ၀င်သွားကြသည် ။ သတ်ကွင်းထဲကို ရောက်မှတော့ အပစ်ခံရတာပေါ့ဗျာ။ အကယ်၍များ သူတို့ယုတ်မာ ကြလျှင် ငါတို့ဘယ်လို လမ်းကြောင်းကို လျှေက်ကြမလည်း ကြိုတင် မစဉ်းစားထားကြ ။ ဖြစ်လာတော့မှ ကမန်းကတန်း ထပြီး ကန့်ကွက်ကြသည် ။ လုပ်သမျှက အစီအစဉ်မကျ နိူင်ငံခေါင်းဆာင် ဘ၀ကို ဒီလူတွေ ရောက်ရင်လည်း သိပ်တော့ ထူးမှာ မဟုတ်ဟု တကယ်ပင် ထင်မြင်ယူဆမိပါသည် ။ တကယ်ဆို အာဏာရှင်တွေ ဆိုတာ သမိုင်းမှာလည်း ယုတ်မာကောက်ကျစ်တယ် ၊ ပစ္စပ္ပုန်မှာလည်း လိမ်ညာနေမှန်း သူတို့ သိသိကြီးနှင့် ပြင်ဆင်ထားဖို့ ကောင်းသည် ။
ဒီနေ့ ချိန်ခါမှာ လူကြီးတွေ က ဦးဆောင် ပြီး နိူင်ငံအရေးကို တောင်းဆိုနေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေလည်း ပါဝင် ပတ်သက်သင့်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ် ။ လူကြီးနဲ့ လူငယ်တွေ ကြားမှာ အမြင် ကွာဟချက် တွေရှိတယ် ၊ ခံယူချက်တွေ ၊ အတွေးအခေါ်တွေလည်း သိပ်ပြီး တူညီကျမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ လူကြီးတွေက အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်မှု အပိုင်းမှာ အားသားပေမယ့် ၀ါဒရေးရာမှာ ဆက်စပ် တွေးခေါ်ရင်း မသိမ်းပိုက်ထားသင့်တဲ့ အတွေးအခေါ် အချို့ကို သိမ်းပိုက်ထားကြတယ် ။ လူငယ်တွေက အတွေ့အကြုံ နုနယ်ပေမယ့် တက်ကြွတယ် ၊ ဘာအတွေးအခေါ်မှ မသိမ်းပိုက်ထားသေးတဲက အတွက် မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်သာရှိ ရင် နောက်လိုက်ကောင်းလုပ်ကြဖို့ ၀န်မလေး ကြဘူးလို့ ကျွန်တော်က ခံယူထားတယ် ။ ဒီနေ့ခတ် လူငယ် တော်တော်များများဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အသိညဏ် အဆိပ်ခတ်မှု ကြောင့် နိူင်ငံရေး ပညာတွေ မကြွယ်ဝကြပေမယ့် တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့ စိတ် ၊ မဟုတ် မခံလိုတဲ့ စိတ် တော့ သူတို့ရင်ထဲမှာ ရှင်သန်နေကြတုန်းပါဘဲ ။ ဒါတွေကို လူကြီးတွေက လမ်းပြနိူင်ရင် တိုင်းပြည် အတွက် အကြီးမားဆုံး ခွန်အားတွေကို လူငယ်တွေဆီက ရရှိနိူင်တယ် ကျွန်တော် ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ် ။
နည်းပညာ အကူအညီကြောင့် ၀ါသနာတူရာ ၊ ရည်ရွယ်ချက်တူတဲ့ လူငယ်တွေကို အလွယ်တကူ စုစည်းလို့ရတယ် ။ သူတို့ကို လမ်းမှန်ပြပြီး လက်တွေ့ကျတဲ့ နိူင်ငံရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ကို သာ တင်ပေးလိုက်နိူင်ရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် အနာဂတ် မကြာခင် လှပလာမှာ မုချမသွေပါဘဲ ။လူငယ်တော်တော် များများကလည်း တောင်းဆိုလာကြပါတယ် ၊ သူတို့ နိူင်ရာ တာဝန် ယူချင်တယ် ၊ သူတို့ရင်ထဲက တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ကို ပြချင်ကြတယ် ။ သူတို့ရဲ့ အစွမ်းအစနဲ့ သတ္တိကို တိုင်းပြည် အတွက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးချလာကြတယ် ။ လူငယ်တွေ နိူင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားလာတာဟာ ကျွန်တော့်တိုင်းပြည် အတွက် အင်မတန်မှ အကျိုး ကျေးဇူး များပါတယ် ။ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ နိူင်ငံရေးကို စိတ်ဝင် စားတာက ရာထူးကို လိုချင်လို မဟုတ်ပါဘူး အာဏာကို ခုံမင်လို့မဟုတ်ပါဘူး ၊ တိုင်းပြည်ကြီး ပြိုကျပျက်စီးနေတာကို မကြည့်ရက် ကြလို့ နိူင်ငံအရေးကို ကျရာ အခန်းဂဏ္ဍကနေ တာဝန် ယူပေးချင်တာပါ ။ အချို့လူငယ်တွေ ဆို အ၇မ်းကို ထက်မြက်ကြတယ် ၊ အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ သူတို့ အတွေးတွေကတော့ ကြောက်စရာ ကောင်းလောက် အောင် ထက်မြက်ကြတယ် ။ ကျွန်တော် တို့ သူတို့ အရွယ်ကဆို နိူင်ငံရေး ဆိုတာ ဘာမှ မသိသေးပါဘူး ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ကို အရမ်းလေးစားတယ် ၊ သူတို့သတ္တိလေးတွေ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလာတာကို အရမ်းအားရတယ် ။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို အားပေးတယ် ။
အာဏာရှင်တို့၏ အသိညဏ် အဆိပ်ခတ်မှု ကြောင့် ကျွန်တော်တို့တတွေ သတင်းမှန်တွေနဲ့ဝေးကွာ ၊ မှန်ကန်မှု မရှိတဲ့ သမိုင်းတွေ သင်ကြား ၊ ဖောက်ပြန်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အယူအဆ တွေ ကြားမှာ ကြီးပြင်းလာကြပေမယ့် တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့စိတ် ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆက်မပြတ် ရှင်သန် စီးဆင်းနေဆဲပါဘဲ ။ ပြင်ပကမ္ဘာတွင် ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု များကို လုပ်ဆောင် နိူင်သော်လည်း ကျွန်ူပ်တို ၏ ရင်တွင်းမှ မျိုးချစ်စိတ်ကို ဖိနှိပ်လို့မရ ၊ သေအောင် သတ်လို့မရ ၊ အမျိုးကို ချစ်သည့် ကျွန်ူပ်တို့၏ မျိုးဆက် သွေးများသည် အဆက်မပြတ် ရှင်သန်စီးဆင်း နေကြောင်းကို ပြဆိုသည့် အနေဖြင့် သွေးမျိုးဆက် ဟု အမည်ပေးထားသည့် ကျွန်ူပ်တို့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်အင်အားစုများ စုစည်းစွာ ဖြင့် စတင်လုပ်ရှားပါတော့မည် ။ တိုင်းပြည် အတွက် ပါဝင်ပေးဆပ် ချင်သူများ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ကြရန် မြန်မာနိူင်ငံသား အားလုံးကို လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်ပါသည် ။